SAA & CRP waxay khuseeyaan baaritaanka cusub ee Virus pneumonia (NCP)
Waqtiga: 2020-02-12 Hits: 168
Tan iyo markii cudurka 'coronavirus' uu ka dilaacay Wuhan, Shiinaha, dowladda Shiinaha oo ay weheliyaan dhammaan dadka Shiinaha waxay qaadanayaan dadaalkeenna ugu xooggan si aan ugu guuleysano dagaalka ka dhanka ah cudurka cusub ee cudurka coronavirus.
Kiisaska Coronavirus iyo dhammaan kiisaska looga shakisan yahay infekshanka coronavirus waxay ku baaqayaan in la helo waqti ku habboon oo ogaanshaha cudurka, karantiilinta, iyo daaweynta.
Sida ku xusan qorshihii daaweynta ee ugu dambeeyay ee cudurka 'pronavirus pneumonia' (NCP), oo ay soosaartay Gudiga Caafimaadka Qaranka, ayaa lagu sheegay in heerarka ugu badan ee bukaanka cudurka 'C-reactive protein' (CRP) heerka ay ka sarreeyaan kooxda aan cudurka qabin, heerka procalcitonin (PCT) waa caadi ah; Heerka D-Dimer wuxuu ka kici doonaa xaaladaha daran.
Isla mar ahaantaana, daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan inay la mid yihiin CRP, serum amyloid A (SAA) waa fal-celin xasaasi ah oo ku jirta wejiga daran. Heerka CRP & SAA ee dhiiga waa tilmaame muhiim ah oo ka tarjumaya heerka caabuqa bukaanka. Tijaabinta caabuqa iyada oo loo marayo CRP & SAA waa la dadajin karaa isla markaana calaamadda-waqtiga dhabta ah ee akhrinta ayaa leh fursad weyn oo u oggolaanaysa dhakhaatiirta inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagama maarmaan ah.
Bukaannada cusub ee cudurka coronavirus qaba, heerka SAA aad buu u kordhay inta lagu gudajiray caabuqa hore, waxa intaa dheer, heerka SAA & CRP labaduba way is bedbeddeli doonaan iyadoo ay la socoto cudurka caabuqa oo sii socda; Ka dib markii curiyaha cusub ee 'coronavirus' uu isu beddelo mid taban, SAA si aad ah ayey u yaraataa illaa ay caadi ku soo noqoto.
Maaddaama la xaqiijiyay in coronavirus-ka cusub uu ku faafin karo qof ilaa qof, sida caadiga ah ka dib xiriir dhow oo lala yeesho bukaan qaba cudurka, karantiilinta ayaa lagula taliyaa in si deg-deg ah looga hor tago. Sidee ku saabsan inta badan kiisaska looga shakisan yahay? Bukaannadaan la tuhunsan yahay waa in lagu dhiiri-galiyaa inay booqdaan xarumaha caafimaadka ee heer bulsho si loo yareeyo culayska badan ee cusbitaalada waaweyn iyo yareynta halista gudbinta dugsiga sare.
Isugeynta baaritaanka CRP + SAA, xitaa haddii NCP uusan laheyn astaamo muuqda, qandho ama qufac, laakiin heerka SAA ee jirka uu ka badan yahay kan caadiga ah, wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa heerka cudurka qaladka.
Bogga Hore: Sonkorowgu waa u nugul yahay cudurka infakshanka cusub ee Virus
Bogga Dambe: Sinocare oo leh Medlab Middle East 2020